fanaporofoana ara-tsiantifika, ary voaresaka manokana ny Covid Organics izay nanaovan’ny Filoha Malagasy doka sy nalefa tany amina firenena Afrikanina maro. Isan’ny notononina manokana ireo firenena toa an’i Niger, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale nahazo izany. Efa nisy moa ilay fandisoana nataon’ny CEDEAO sy ny rafitra ara-pahasalamana mifandraika aminy, fa tsy nanao kaomadina Covid organics avy amin’I Madagasikara. Ilaina ny fanaovana ireo "essais cliniques" hanaporofoana fa mandaitra tokoa ilay tambavy ary tsy misy voka-dratsiny amin'izay misotro azy, hoy ny Dr Matshidiso Moeti. Lasa miteraka resabe manerana ny kaontinanta Afrikanina moa amin'izao fotoana ny Tambavy Covid Organics Malagasy, ka anisan'ny fanakianana mahazo azy ny hoe tsy ampy ny fotoana nanaovana ny andrana, tsy mazava tsara hoe inona marina no tena asan'ilay tambavy ary inona no fepetra takiana raha hisotro azy. Marihina fa ny OMS no nanome vola antsika voalohany mitentina 3,7 tapitrisa euros, fony mbola tsy tafiditra teto ny coronavirus. Manomboka mihamafy ny don-tandroka ho an’ny fanjakana Rajoelina, ka asa izay hiafarany. Manamafy hatrany ny OMS fa 190 000 ny olona mety ho faty aty Afrika, raha tsy mahomby ny fihibohana.